Tuesday June 30, 2020 - 08:00:59 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Salaad Cali Jelle oo kamid ah lataliyaasha dhanka siyaasadda ee Max'med Cabdullaahi Farmaajo horayna uga mid ahaa Golihii wasiirrada DF-ka ee Soomaaliya kusoo hoggaamiyay ciidamada Xabashida Itoobiya ayaa markale ugefay shareecada islaamka.
Ninkan dabadhilifka ah ayaa ku jeesjeesay mid kamida Aayadaha Qur'aanka Kariimka, isagoo ka hadlayay munaasabad lagusoo dhoweynayay go'aan ay dhawaan xildhibaanada baarlamaanka ku ansixiyeen waxa loogu yeero qoondada gobolka Banaadir ayaa ku hadaaqay hadallo kufriyaat ah.
Salaad Cali Jeelle ayaa golaha baarlamaanka ee dowladda ku sheegay in uu meel mariyay Aayad Qur'aan!.
"Baarlamaanka waxaan usheegaa Aayad qur'aan ayaad meel mariseen" sidaas waxaa si jees jees ah u yiri Salaad Cali Jeelle oo ah dabadhilif la shaqeeya shisheeyaha.
Wuxuu intaas kasii daray Xildhibaanada Baarlamaanka DF-ka ayuu ku tilmaamay kuwa fuliyay wax uu Alle u sheegay sida uu hadalka udhigay oo uu ku tilmaamay qoondada gobolka Banaadir.
Ninkan dababadhilifka Faajirka ah intaas kuma ekaysane dastuurka udegsan DF-ka ee Q.Midoobay sameysay ayuu ku tilmaamay mid lajaan qaadaya Aayada Qur'aanka Kariimka.
Halkan ka degso hadalka Salaad Cali Jeelle MP3 ama hoos ka daawo